Mbido Afọ Mbido | Lọ Akwụkwọ Oakleigh na Early Early Intervention Center
Ventionlọ Ọrụ Ntinye Aka nke Oge Afọ
Yelọ Ọrụ Ntinye Aka nke Oge Afọ (EYIC) na-enye ụmụaka ọrụ dị iche iche site na ọmụmụ rue afọ akwụkwọ iwu nwere ọtụtụ mkpa agụmakwụkwọ na nkwarụ pụrụ iche..
Ndị otu EYIC sitere na saịtị nke Oakleigh School na Acorn Assessment Center nwekwara ntọala na Colindale School. Childrenmụaka na ndị ọrụ nwere ohere zuru oke na ọtụtụ ụlọ ọrụ dị na saịtị abụọ ahụ. A na-ahazi ventionlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Afọ Ọhụrụ na Oakleigh iche iche na ụmụaka ndị bịara n'okpuru EYIC na-aga n'ihu na agụmakwụkwọ dịgasị iche iche n'oge afọ akwụkwọ iwu.
EYIC nwere ngalaba atọ, nke ọ bụla na-egbo mkpa ụmụaka nke oge mbụ nwere mkpa agụmakwụkwọ pụrụ iche na nkwarụ n'ụzọ dị iche.
Lee: Yelọ Ọrụ Ntinye Aka nke Early Years
Ornlọ ọrụ Acorn dabere na saịtị abụọ; otu na Oakleigh School na Whetstone na otu na Colindale Primary School. Acorn na-abịa n'okpuru njikwa nke Oakleigh School & Early Years Intervention Center. Acorn bụ onye onye isi na-enyere aka, na klaasị ọ bụla enwere onye nkuzi klaasị yana mmadụ atọ na anọ na-enyere ndị na-enyere aka aka dabere na mkpa. Saịtị ọ bụla na-enye ebe igwu mmiri, ebe igwu egwu dị nro na ohere maka ebe dị egwu.
Afọ mmalite nke Barnet Ziga Otu Ndụmọdụ
Site na Eprel 2021, Otu Nsonye na ụlọ akwụkwọ pre-school na ndị nkuzi nkuzi ụlọ akwụkwọ jikọtara ọnụ wee mepụta otu ọkachamara ndụmọdụ afọ na ọrụ ntinye aka, afọ ndị mbụ na-ezipụ ndị otu ndụmọdụ. Ndị otu afọ izizi zitere ndị otu ndụmọdụ na -enye ụmụaka aka na -egosi ụfọdụ igbu oge ma ọ bụ ihe isi ike na mmepe ha, n'okpuru afọ 5 ndị ​​bi na London Borough nke Barnet.